Micro-LED tekinoroji inosvika nechizvarwa chechitatu Apple Watch | Ndinobva mac
Micro-LED tekinoroji inosvika nechizvarwa chechitatu Apple Watch
Runyerekupe urwu rwunopfuurira mberi uye nderwekuti kana izvo zvakataurwa nezvazvo masvondo mashoma apfuura yaive yechipiri vhezheni yeApple Watch, nhasi tinokuunzira nhau dzekutanga dzingave iri yechitatu vhezheni yechigadzirwa iyo yaizosvika muhafu yepiri ya2017.
Parizvino iyo skrini yakaiswa pamusoro Apple Watch Chizvarwa chekutanga chine OLED tekinoroji, tekinoroji iyo isati yasvika iyo iPhone. Nekombiki iyi zvinokwanisika kuzadzikisa, pakati pezvimwe zvinhu, kuchengetedza simba pamwe neakapinza mavara uye akadzika matema.
Nekudaro, tekinoroji inoenda nekukurumidza zvakanyanya kupfuura iyo tekinoroji musika wezvigadzirwa uye zvinoenderana DigiTimes Apple ingadai yatove kuyedza iyo Micro-akatungamira tekinoroji pama skrini aigona kuiswa pachizvarwa chechitatu Apple Watch.
Ehe, iwe unoverenga izvo chaizvo, nepo Apple isati yaburitsa iPhone ine OLED skrini, iri kutoedza tekinoroji inotevera yakapihwa zita reiyo micro-LED inobvumidza skrini dzinogona kuve dzakaonda uye dzakareruka. Uye zvakare, ivo vanozokwanisa kubereka yakakura yakakura mhando yemavara iyo yavanogona kuzokwanisa kuwedzera iyo resolution uye kupenya kwavanogona kuve nako.
Uye ndeupi mhando yeruzivo? Chokwadi ndechekuti kumashure muna2014 kambani yeapuro yakatora kambani LuxVue, inoshamisa inyanzvi mune iyo micro-LED tekinoroji yatiri kutaura nezvayo. Tichaona kana fungidziro idzi dzichizobuda zvechokwadi. Parizvino izvo zvatinofanirwa kuita kumirira kusvika munaGunyana uye toona kana chizvarwa chinotevera cheApple Watch chasvika neiyo iPhone 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Micro-LED tekinoroji inosvika nechizvarwa chechitatu Apple Watch
rene antonio sala de santos akadaro
Ndinoda kuti munditumire mapurogiramu, emahara, uye matipi eiyo mac yangu, ini ndichaafarira.
Pindura rene antonio sala de santos
Teregiramu Desktop inovandudzwa yeMac kuti ishandure 0.9.56
Dzorera MacBook yako kuPKparis USB 3.0 K'1 drive